UDOMEK NAD NARWIĄ / COZY COTTAGE EMLAMBO
Nowe Łachy, Mazowieckie, Poland
Inqugwala sinombuki zindwendwe onguMateusz
3 recent guests complimented Mateusz for outstanding hospitality.
Ndiyakumema ukuba uchithe iholide yakho kwindlu yonyaka wonke ekwazi ukuhlalisa abantu aba-5 (max. 6). Le ndlu ibekwe kwindawo ebiyelweyo, enemithi ngokuyinxenye enendawo eyi-8700 m2. Iploti ikhuselwe yinkqubo ye-alamu kunye nokubeka iliso. Imalunga ne-100m ukusuka elucingweni ukuya eNarew.
I-cottage itholakala eNowe Łachy, i-100 km ukusuka eWarsaw, i-8 km ukusuka eRzewnia kunye ne-17 km ukusuka eRóżan. Kulo mmandla (malunga neekhilomitha ezili-1) kukho iivenkile ezimbini zegrosari kunye nemizi-mveliso.
Kukho i-carport kwisakhiwo, kunokwenzeka kwakhona ukupaka iimoto ezininzi.
Zintathu izindlu kwisiza, enye kuzo iqeshiwe.
I-cottage ine-veranda enkulu ene-barbecue, itafile kunye nezihlalo, ezilungele ukuchitha ixesha nakwimozulu yemvula. Embindini kukho itafile enezihlalo ezinombono omangalisayo wendalo ejikelezileyo, i-leather convertible 2-3 sofa, indawo yomlilo kunye ne-armchair. Phantsi kwakhona kukho ikhitshi elinefestile enkulu, enefriji, i-gas cooker, iketile yombane, i-oven microwave kunye nezitya. Ecaleni kwayo kukho igumbi lokuhlambela elineshawa, isinki kunye nendlu yangasese. Kumgangatho wokuqala kukho igumbi lokuhamba kunye neTV kunye ne-sofa yesikhumba eguqulwayo ye-2, kunye ne-armchair. Kukwakho amagumbi amabini atshixwayo aneebhedi ezingatshatanga kunye needesika, zombini zinembonakalo entle. Owokugqibela unegumbi lokulala elinomtsalane kunye nophahla oluthambekileyo, oluxhotyiswe nge-armchair kunye nebhedi yabantu abayi-1-2.
Ubumelwane buzolile kakhulu kwaye buzolile. Yiparadesi yabadobi, abacholi bamakhowa, ukukhwela ibhayisekile, ukubaleka kunye nabathanda ukuhamba. Amahlathi ajikelezileyo agcwele amakhowa kunye namaqunube, kwaye umlambo unentlanzi. Kumgama omalunga neekhilomitha ezisi-7 kukho ilali yaseBrzóze Małe enendawo yokuhlambela, ulwandle oluhle, indawo yokuzivocavoca evulekileyo kunye nevenkile yokutya, kunye nethuba lokuqesha iikayak kunye nezikhephe ezinyovwayo. Kufuphi (malunga ne-5 km) kukho idolophu ekhangayo yaseBindużka enepanorama entle yaseNarew. Kufutshane nesicwangciso, unokuthatha isikhephe ukuya kwelinye icala lomlambo, apho kwidolophu yase-Nowy Lubiel kukho icawa yembali yomthi yenkulungwane ye-16, i-ATM kunye neziko lezempilo.
Kwisakhiwo, ungasebenzisa i-grill ebekwe kwiveranda yendlu, i-sauna (kwenye indlu), ukuqasha iibhayisikili kunye nesikhephe. Phakathi kwezinto ezikhangayo zesakhiwo, unokukhankanya itafile ye-ping-pong, itafile yebhola ekhatywayo, injongo yebhola ekhatywayo, ibhasikidi yebhasikithi, umnatha we-badminton, i-sun loungers, isitulo esishukumayo, kunye ne-hammock. Unokuphinda uququzelele umlilo, isidlo sakusasa kwi-terrace (ngaphandle kwefenitshala yegadi) okanye iti yasemva kwemini esifubeni sendalo. I-cottage ijikelezwe ngokuthe ngqo zizityalo eziluhlaza kunye nehlathi lepineyini, inxalenye yeso sakhiwo yindawo engenanto efanelekileyo yokuzonwabisa kwangaphandle.
Iindwendwe zinokusebenzisa i-Intanethi kwinethiwekhi ye-Plus (ezinye iinethiwekhi zisebenza kumda olinganiselweyo).
Ngenxa yobume bale ndawo kunye nommandla wezinye iipropati, ukunikezelwa kokuqeshisa i-cottage akubhekiselwanga kubantu abafuna ukuququzelela imicimbi ekhethekileyo, ukuphulaphula umculo ophezulu kude kube sebusuku. Sikhetha iintsapho ezinabantwana, izibini, abantu abafuna ukuchitha ixesha elihle ngoxolo.
Siphinde sibe nenketho yokulungelelanisa ukukhwela kwinqwelo ehlotyeni okanye ukukhwela i-sleigh yangempela ebusika.
Izilwanyana ezifuywayo zamkelekile (zihlala zikhona izinja ezi-3-4 ezinomoya omnene kwisakhiwo). Inani elikhulu labantu abahlala endlwini lifuna ilungiselelo kunye nentlawulo eyongezelelweyo. Umthi wendawo yokucima umlilo / i-sauna iyahlawulwa kwakhona (PLN 80 / ngosuku). Inani elincinci lobusuku li-2. Kunokwenzeka ukuba ubone i-cottage iphila.
Ngenxa yokuba indlu yokhuni, ukutshaya kunqatshelwe ngokungqongqo ukhuseleko lweendwendwe endlwini.
Iilwimi: English, Français, Magyar, Italiano, Norsk, Polski, Русский, Español